Semalt waxay kuu sheegeysaa waxkasta oo ku saabsan mashiinka raadinta ee Seo
Buuqyo badan oo ku wareegsan mashiinka raadinta isbeddelka. Maanta waxaad baraneysaa wax walba oo ku xiran mawduucan kulul! Waa maxay SEO? Waa maxay faa'iidooyinka SEO? Erayadee ayaa ku wareegsan SEO? Yaa wax ka baran kara oo u adeegsan kara SEO? Maqaalkaan, Ivan Konovalov, oo ah Semt Maamulaha Guusha ee Macaamiil, wuxuu isku dayayaa inuu ka jawaabo dhammaan su'aasha ku qoran kor ku xusan.
Marka qofku galo ereyo muhiim ah (mawduuc kasta ama su'aal) mashiinka raadinta (wuxuu noqon karaa Google, Bing, Yahoo, iwm.) Isaga ama iyada waxay helayaan natiijooyin raadin kala duwan. Sida ay tahay, tani waxay ka dhigan tahay SEO (raadinta makiinada raadinta), guud ahaanna wuxuu ku soo rogaa darajada ku taal bogga hore ee natiijada raadinta.
Maxay muhiim u tahay SEO?
adduunka maanta ee dhaqdhaqaaqa ah, rikoorka micnaheedu waa wax walba. Iyadoo malaayiin bog oo ku tartamaya dareenkaaga, waa kuwa kaliya ee ku qeexan bogga hore ee hela heshiis wanaagsan. Kaliya noqo macquul; kuwaas oo dhulka ku haysta wakhtigii ay ku marin lahaayeen boqolaal bog oo natiijooyin raadin ah? Yaa Tani waxay sharraxaysaa baahida loo qabo SEO.
Maxay yihiin faa'iidooyinka SEO?
Shaki la'aan, faa'iidada ugu weyn ama faa'iido badan oo ay leedahay qaadashada SEO waa gaadiidka dabiiciga ah (aan la bixinin ama dabiiciga ah) waxay dhalinaysaa shabakadaada. Markaad kordhiso taraafikada webka, badeecooyinkaaga iyo / ama adeegyadu waxay arki karaan dad dhagaystayaal ah, taas oo ka dhigan in isbedelka, iyo sidoo kale faa'idada faa'iidada, la toogan karo.
Yaa loogu talagalay SEO?
Waxaa loola jeedaa qof kasta. Inkasta oo farsamooyinka casriyeynta raadinta ay tahay mid aad u adag (ma ka fikiri kartaa wax algorithm web-ku saleysan oo aan ahayn), qabsashada aasaasiga ah wuxuu sameyn karaa cajaa'ibaad aad blog ama boggaaga. Eeg hareeraha, waxaad arki doontaa boqolaal barnaamijyo oo bixiya waxbarasho bilaash ah oo SEO ah. Ha iska indha tirin. Haddii websaydhadaagu ku biiraan horyaalka weyn markaa waxaad awoodi kartaa inaad shaqaaleyso 'qaab' = "text-decoration: none; xadka hoose-hoose: 1px adag;" href = "https://semalt.com/qa/seo-guru..htm "> Khabiir SEO ah .
Shuruudaha SEO-ku xiran oo aad ogtahay
1. Kaabiga White SEO - tani waxay loola jeedaa in si faahfaahsan loogu naqshadeeyo websaydh ay la socdaan dhagaystayaasha. Fikirka ka dambeeya koofiyadaha cad cad ayaa fudud; ha u xoqin daawadayaasha si qalad ah, marnaba ha u oggolaanin boggagaaga inuu ku tiraahdo spam. Hagaajinta kalsoonida inta aad samaynayso wax kasta oo suurtogal ah si aad u noqotaan kuwo awood u leh.
2. Kaabashka madow SEO - waxaad ka fekereysaa tan sida soo horjeeda cad cad SEO. Halka koofiyada caddaanku diiradda saaraan ka qaybgalka dhagaystayaasha, koofiyadda madow maahan. Fiiro deg-deg ah ayaa muujinaysa in dadka ku hawlan farsamadani inta badan ay helaan boggooda internetka oo ay soo sheegaan sida spam. Inta badan waxay leeyihiin liisaska liita, laakiin si kastaba ha ahaatee, waxay sameeyaan lacag fiican. Waxay ka caawisaa mid ka mid ah si uu u helo jaantusyada si dhakhso ah wax kasta oo kale oo soo socda.
3. SEO-ga: waxay ka kooban tahay wax walba oo ku yaala boostadaada. Waxay noqon kartaa tixraacyada qoraallada, cinwaanada, qaabka URL, qoraalka hoose (faylasha sawirada), xawaareynta xawaaraha, isku xirnaanta, tayada qoraalka iyo waxyaabo kale oo badan.
4. SEO-ka-off-ka: tani waxay tixgalineysaa maamulka domain. Halkan waxaa ku jira qodobo ay ka mid yihiin da'da domain, caan ku ah, iyo arrimo la xidhiidha arrimahaas Source .
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin ku saabsan qorista posts SEO-friendly:
cilmi baarista ereyada muhiimka ah
u tag ereyada muhiimka ah oo leh qiime sare iyo tartan hoose
ku dar xiriiryo
Isticmaal sharraxaad sax ah